Malunga nathi-Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
INanchang Weiti Technology Co, Ltd.
Sinemveliso yemveliso epheleleyo kunye nesibonelelo sokuhlangabezana namandla emveliso kunye neqela lethu lophando lobungcali kulawulo olungqongqo lomgangatho.Iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka kwaye iqela lethu loyilo linokukunceda wenze iilebheli zakho zabucala. Iqela lethu lokuthengisa liya kuba iiyure ezingama-24 liphendula imibuzo yakho kwaye lisombulula iingxaki zakho. Ukuhanjiswa, sinesivumelwano ne-DHL, i-FEDEX, i-UPS, i-EMS, i-SF, i-TNT yemali engcono yokuhambisa kunye nesiqinisekiso sokuhamba.
Umgangatho ungundoqo, inkonzo yenjini. Sijonga ekunikezeleni abathengi bethu iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo ezilungileyo.Zonke iimveliso ezi-odolwe kuthi ziyakonwabela ukubuya okanye ukubuyiselwa imali kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi ukuba kukho naziphi na iingxaki ezikumgangatho kunye nokuhamba ngokonakala ngexesha elinye, iqela lethu emva kwentengiso ngokuqinisekileyo liya sombulula ingxaki yakho kwiiyure ezingama-24.
Ukuza kuthi ga ngoku, sikhonze abathengi abavela kumazwe angama-50 kwihlabathi liphela, kwaye i-80% yabo inike inqanaba eliphezulu lokuqondwa kunye noxabiso ngemveliso yethu kunye nenkonzo, kwaye bathi baya kuhlala begcina ubudlelwane obuzinzileyo kunye nathi. Phakathi kwabo, abathengi bethu babandakanya abathengi benkampani, abasasazi, iivenkile ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kunye neevenkile ezikwi-Intanethi, njl.
Ukuzibophelela ekukhonzeni abathengi bethu kunye nokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, sinethemba lokwenza inkqubela phambili kunye nokuphuhlisa kunye nabathengi bethu. Sizimisele ukugcina ubudlelwane bexesha elide kunye noluzinzileyo kunye nabathengi bethu. Ngophuculo oluqhubekayo lomgangatho wemveliso kunye nenkonzo, sinokwenza abathengi bethu bazive kulula kwaye baqiniseke ngakumbi ukuba basebenzisane nathi, oko ke kube kukufumana imeko yokuphumelela. Ngeengxaki zabathengi, siya kubonelela ngokubonisana kunye nezisombululo ngokukhawuleza, ukwenzela ukuba abathengi bangabi naxhala.
Izandiso zeEyelash, I-liner yamehlo, Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo yamehlo, Imivimbo ye-mink, eyeliner,